Maamulka Gobolka Baay oo baaritaano ku wado isku dhicii shalay ka dhacay Magaaladda Baydhabo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka Gobolka Baay oo baaritaano ku wado isku dhicii shalay ka dhacay...
Maamulka Gobolka Baay oo baaritaano ku wado isku dhicii shalay ka dhacay Magaaladda Baydhabo
Maamulka Gobolka Baay ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan waxa sababay dagaalkii koobnaa ee shalay gudaha Magaaladda Baydhabo ku dhaxmaray Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Goboleedka Koofur Galbeed.
Gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee Gobolka Baay ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin waxyeelada soo gaartay dadka Shacabka ah asaga oo xusay in wax laga xumaado ay tahay in dhibkaas ay u geysteen dadkii laga doonayey in ay gargaaraan dadka shacabka ah.
Gudoomiyaha oo xusay in arinkaasi aan shil la dhihi karin ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano adag oo lagu ogaanayo qaabka ay waxa u dhaceen iyo cidda leh masuuliyadda dadka Shacabka ee ay waxyeeladda kasoo gaartay shaqaaqadii shalay ka dhacday Magaaladda Baydhabo.
Ku dhawaad 10 qof ayaa u geeriyooday dagaalkii shalay ka dhacay Magaaladda Baydhabo halka ay in kabadan 15 ruuxna ay isbitaaladda u jiifaan dhaawacyadiii kasoo gaaray mashaqadaas.
Previous articleTaliyeyaasha ciidamada oo soo saaray awaamiir dhinaca amniga iyo digniin cusub (Akhriso)
Next articleTaliyaha Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka oo ka hadlay Howlgalka Xasilinta Magaalada Muqdisho.